Ezi ntụziaka | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ezi ntụziaka
Anyị na-eto eto 'Fairy Tale' na-akụ ugbo anyị: kụrụ iwu na nlekọta nke nlekọta
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-enwe ịnụ ọkụ n'obi banyere ụdị nri ube dị iche iche. Na n'isiokwu a, anyị ga-atụle ọ bụghị naanị ọdịdị dị iche iche varietal, kamakwa ọnọdụ maka ọganihu na-aga nke ọma: chọrọ ala, mmiri na fertilizing. Ịnweta ozi a natara, ị nwere ike ịkụ mkpụrụ dị iche iche dị mma ma nweta ezigbo owuwe ihe ubi.
Ojiji nke letus gris: uru na nsogbu nye ahụ mmadụ
Kedu ihe bụ letus letus, taa, ma eleghị anya, onye ọ bụla maara. Nke a bụ ụdị letus nke na-ele anya (ọ bụ mgbe a na-egbutu ya) dị nnọọ ka ejiji edo edo. Akwụkwọ ndị ahụ bụ kemmiri na crispy (ruo ogologo oge a na-akpọ salad "crisp"). Eji ya mee ihe maka isi ihe dị na nri nke salads, yana nri vitamin na nri ndị ọzọ na isi nri.
Ojiji nke maple juice: bara uru Njirimara na contraindications
Ọnyà anyị na-adịghị mma dị ka birch. Otú ọ dị, site na ọnụ ọgụgụ nke uru bara uru, ọ bụghị dị ala karịa ya. Na mpaghara North America, ihe ọṅụṅụ a bụ mba, a na-emepụta ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ihe dị na saple sap, otú o si bara uru, otu esi anakọta maple sap na ihe a pụrụ ime ya.
Niile banyere uru na emerụ ihe onwunwe nke eggplant
Eggplant (nke na-anọchi anya ya) na-ezo aka na mkpụrụ osisi herbaceous nke mkpụrụ ndụ ihe nketa Bleeding. Ala nna ya bụ India, Asia, na Middle East. N'ime ọhịa, mkpụrụ ahụ nwere agba odo odo ma na-etolite na India, dị na Burma. Otu osisi yiri ya na obere mkpụrụ dị na China. Dị ka nri omenala mara ogologo oge.
Kedu ka mmanụ aṅụ sitere na pine si apụta?
N'ihi uru bara uru nke a napụtara na ọhịa pine, ị nwere ike inyere aka ahụ aka ịgbake. A na-emepụta ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa karịsịa na mmiri, mana ọ bụghị mmadụ nile nwere ike ịga na oke ọhịa n'oge a. Ma, taa, enwere ohere iji nweta ọnụ ọgụgụ kachasị irite uru ọbụna n'ụlọ, na-eji mmanụ aṅụ sitere na cones ma ọ bụ pine fir, nke jupụtara n'ọtụtụ dịgasị iche iche bara uru bara uru.
Ichekwa mmiri na mmiri na ndagwurugwu maka oyi
Ogwu bụ bọọda kachasị mma nke na-enye ụtọ na mmiri na ọkọchị. Ọ bara ọgaranya na vitamin, microelements na ihe ndị ọzọ na-enyere ụmụ mmadụ aka. Ma, gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na oyi abịala, na-enweghịkwa tomato "n'ụzọ ọ bụla"? N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị otu esi edozi mmiri mmiri na mmiri maka mmiri oyi, ka ha wee nwee ike ịtọ ụtọ.
Ntụziaka maka mmanya dị ọcha nke anụ ụlọ
Na omenala, a na-eji anyị mmanya na-esi na mkpụrụ vaịn. Na kasị njọ - si apụl. Ma ndị Asia maara na ọ bụ plum nke na-enye amamihe, ahụike na ogologo ndụ. N'isiokwu a, anyị na-akọwa otu esi eme ka mmanya na-esi ísì ụtọ n'ụlọ na-eji uzommebe dị mfe. Nhọrọ na nkwadebe nke plums Malite na-akwadebe mmanya, N'ezie, ọ dị mkpa iji dozie ihe maka ya.
Anyị na-akwadebe cherry compote maka oyi
Ọ na-atọ ụtọ n'oge mgbede oyi na-atụ iji nweta uto nke ọkacha mmasị gị n'oge okpomọkụ beri. Iji mee nke a, ọ dị gị mkpa ịrụ ọrụ ntakịrị n'oge ụtụtụ cherị dị ụtọ. Ngwongwo na ngwa ngwa Iji mechie cherry compote maka oyi, onye nnabata ahụ ga-achọ ntakịrị saucepan nke ị nwere ike ịme mmiri, nnukwu saucepan maka ikpuchi ite, ichebe mkpuchi, mkpuchi plastik nwere oghere iji kpoo mmiri, akpịrịkpa, na ngaji.
Ihe ọṅụṅụ mmiri buckthorn: ihe dị na ya, ihe bara uru, otu esi eme ma were, ma ọ ga-ekwe omume n'oge ime ime na inye nwa ara
Oké osimiri buckthorn bụ omenala pụrụ iche na mkpụrụ osisi Amber. Na epupụta, na tomato, na mgbọrọgwụ, na ogbugbo nwere ike ịgwọ ọrịa. Mmiri buckthorn nke oké osimiri bụ ma ahụ ike, tọrọ ụtọ na ọgwụgwọ. Ihe dị na ngwakọta Ihe dị mgbagwoju anya nke tomato buckthorn na-agụnye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ vitamin a maara nke ọma, ihe dị mma nke mineral, organic acid, tannins, antibiotic, pectins, serotonin, flavonoids.
Akụrụngwa bara uru nke mkpụrụ vaịn vaịn ọcha na uzommeputa a na-eme n'ụlọ
Mkpụrụ vaịn adịwo anya bụrụ àgwà dị oké mkpa nke ụlọ ezumike ma ọ bụ n'ámá mara mma. N'ime oge anyị, ị nwere ike ịhụ ụdị ụdị dịgasị iche iche, mana n'etiti ha bụ akara ndị na-enye mkpụrụ osisi ndị na-adọrọ mmasị. Ha na-acha ọcha mkpụrụ vaịn. Ka anyị mụta otú e si eme mkpụrụ vaịn na-atọ ụtọ na ya. N'ihe gbasara nkpuru-vine. Mmanya vine di iche iche bu ihe nzacha di iche iche na mkpuru osisi di ntakiri ma o bu na ha adighi (ya mere enweghi nkpuru vine n'uzo).
Otu esi eji akpu akpu eji eme kpoo
Ọtụtụ n'ime anyị na-amalite ụbọchị anyị n'otu ememe ahụ: ịṅụ iko nke aromatic na kọfị tonic. Ma, ọ dị mwute, ọ bụghị mmadụ niile nwere ike imeli ya n'ihi nsogbu na ọbara mgbali. Ọ na - apụta na e nwere ezigbo ihe ọzọ na - aṅụ mmanya a na - agba ume - kọfị kọfị. Esi esi ya nri - a ga-atụle nke a n'isiokwu anyị.
Ihe bara uru mkpụrụ pọmigranet bara uru. Olee otu esi ahọrọ ihe ọṅụṅụ ọhụrụ na mkpụrụ kwesịrị ekwesị
Ebe ọ bụ na n'oge ochie, ihe a kpọrọ mmadụ maara banyere uru bara uru nke pọmigranet. Ọbụna Hippocrates ji beri a maka ọgwụgwọ ọrịa dị iche iche. Ka ọ dị ugbu a, mkpụrụ pọmigranet ahụ abaghị uru, ma, n'ụzọ dị iche, nanị ọtụtụ, n'ihi na ọ nwere ọtụtụ ihe bara uru. A na-elebara anya na mkpụrụ osisi tomato ndị a, nke anyị ga-atụle n'ụzọ zuru ezu karị.
Esi esi esi nri syrup, na otú o si bara uru
Taa, marop sirop aghọwo ihe a ma ama dịka ntụgharị shuga. A ga-achọta karama nwere mmiri na-acha odo odo na kichin ọ bụla, na-akwado nri dị mma na ndị na-achọ iji wepu ego. A kwenyere na ngwaahịa a na-egbuke egbuke na-enye anụ ahụ dị mkpa ma na-enyere aka n'ịdị ike.
Kedu ihe bara uru mkpụrụ osisi sunflower maka ụmụ nwanyị
Mkpụrụ osisi ndị a na-acha ọkụ ọkụ na-enwe mmetụta pụrụ iche ma nwee mmetụta dị egwu n'ahụ nwanyị. A na-ekpebi uru nke ngwaahịa ahụ site na ọnụnọ nke ihe ndị na-arụsi ọrụ ike na nụ na mkpụrụ germ. N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe mere nri a ji baa uru maka ahụ ike nke nwanyị. Nri na Njirimara Mkpụrụ nke mkpụrụ osisi sunflower na-emepụta mkpụrụ nke mkpụrụ osisi sunflower kwa afọ, nke dị n'ime nkata buru ibu nke na-ejupụta na petals nke agba odo odo.
Ezi ntụziaka tinctures si feijoa
N'ebe anyi, feijoa bu ihe ozo. Mkpụrụ a na-adịghị ahụkebe dị ka kiwi, painiapulu na rue ụfọdụ strawberries. A na-eji ya esi nri, na-akwadebe ọtụtụ efere: jam, pastry, salads. Ọtụtụ ndị emeela ka ime feijoa tincture. Mmiri a abụghị naanị ihe na-esi ísì ụtọ, kama ọ bara uru.
Otu esi edozi umu osisi di na vodka na otu o si bara uru
Ihe ngwọta dị mma na ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya na-aba n'anya - mpempe akwụkwọ a na-eme n'ụlọ. Mmiri mmiri na-esi ísì ụtọ nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ na-ezipụ ogologo oge oyi, na-echeta oge okpomọkụ. Otu n'ime uru ọ bara bụ na ọ gaghị esiri ike ịṅụ mmanya dị otú ahụ. Kedu ihe dị nro na-amịkọrọ bara uru Echela na tincture ahụ sitere na vodka na plums - ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-egbu egbu.
Otu esi eme ka tkemali na Georgian: usoro nhazi nke nzọụkwụ
Tkemali bụ nri Georgian nke na-atọ ụtọ ma na-egbuke egbuke nke na-eri nri anụ. Banyere nkwadebe ya dịka uzommeputa a ma ama, nakwa banyere ịkwadebe nke ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ n'oge oyi, anyị ga-akọwa na nke a. Ihe dị mkpa ka ị gaa plums Iji dozie ihendori, ị ga-achọ tkemali (ọ bụ plum) iche, ọbara ọbara ma ọ bụ edo edo.
Obere ntụziaka ntụziaka dị mfe nke dị mfe (black-fruited) (ntụ ojii ma ọ bụ oji)
Chokeberry, chokeberry, black ashberry bụ bred bara uru nke nwere ọtụtụ ọnụ ahịa bara uru maka ndị mmadụ, akpan akpan vitamin C na P, organic asịd, sugars, ayodiin. A na-ewere ya dịka beri ọgwụ. Maka ọgwụgwọ na mgbochi ọrịa dịgasị iche iche, a na-ejikarị ya eme ihe. Anyị ga-agwa gị banyere uru nke nsị beri berry, nke ọrịa ndị a na-eji ya na otu esi edozi ya - n'okpuru.
Ntuziaka maka cranberry liqueurs na moonshine
Na oge oyi-oge oyi, ahụ mmadụ na-enwekarị nsogbu vitamin, nsogbu ya na-ebelata, mmadụ na-enwekwa ike ịnweta ọrịa dịgasị iche iche na-efe efe. Ọ bụrụ na mmiri na ọkọchị nwere ohere iji mee ka ahụ dị ike site n'enyemaka nke ndị vitamin ọhụrụ, mgbe ahụ na mbubreyo mgbụsị akwụkwọ na oyi, ị nwere ike iji maka nchebe a na-eme ihe - mmanya ma ọ bụ ihe analogues.
Ntuziaka kachasị mma maka ịme mmanya mmanya, ma ọ bụ esi mee pancake
Plum liqueur - ihe ọṅụṅụ na-atọ ụtọ ma na-esi ísì ụtọ. Aha ahụ n'onwe ya na-eburu ihe na-eme ka obi dị jụụ, na-adighi mma na mma. Nke a abughi nani ihe ọṅụṅụ buru ibu maka mkparita uka di mma, kamakwa ohere ichota ndi mmadu. Tụkwasị na nke a, onye na-emepụta ihe na-enye aka na ọtụtụ nsogbu ahụ ike.
Esi esi nri cashiar squash maka oyi n'oge obibi
N'oge oyi, akwụkwọ nri ọhụrụ na-arịwanye elu na ọnụahịa, mkpa anụ ahụ maka eriri na ihe ahụike adịghị apụ. Nchebe na-abịa na nnapụta. A na-esi n'ọnụ ụlọ, mezzanines na cellars kpoo ụlọ akụ n'oge okpomọkụ na n'oge mgbụsị akwụkwọ ma tinye ya na tebụl. Na mgbakwunye na cucumumba na tomato, ọ bụ ihe ezi uche iji dozie caviar squash.
Ngwakọta ọka na-esi ísì oyi: nzọụkwụ site na nzọụkwụ nri nri na foto
Apụ nke oyi iche: mgbe na-anakọta na otú e si kwadebe maka nchekwa? Atụmatụ maka osisi na-elekọta mgbe owuwe ihe ubi
Ndị na-azụ anụ ụlọ na ndị na-ebugharị maka anụ ọhịa
Infusion nke hawthorn: esi mee ka n'ụlọ
Kedu ihe bụ apteriosis na otu esi edozi esemokwu nke nku na ọkụkọ?
Ebe kachasị mma Chlorophytum crested: nlekọta ụlọ, foto, mmepụta
Kedu ihe dị iche n'etiti mmiri ara ehi na mmiri ara ehi?
Ezi broccoli na nri kaulipuru. Nri nri